Cabdirxmaan Cabdishakuur: Raysal Wasaare Rooble Waa Inuu Si Degdeg Ah Usoo ...
Cabdirxmaan Cabdishakuur: Raysal Wasaare Rooble waa inuu si degdeg ah usoo …
Talaado, Juun, 8, 2021 (Wararka-Maanta) – Hoggamiyaha xisbiga wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa Raysal wasaaraha Soomaaliya ugu baaqay inuu si degdeg ah u soo faro galiyo walaaca laga muujinayo bedqabka dhalinyarada Soomaaliyeed ee tababarka ciidan loogu qaaday dalka Eritrea.Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay warbixin caalami ah oo kasoo baxday xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya in ay meesha ka saartay shakigii laga qabay in dhalinyaradii loo qaaday Etrirea ay ka qeyb qaateen dagaaaladii ka dhacay waqooyiga Ethiopia.
Wararka Maanta : Somaliland oo sheegtay in ay waraaqo u kala dirtay caalamka
“Way dhamaatay xilligii laga dhuumanayay masuuliyadda. Waxaan dalbanaynaa in waalidiinta jawaab la siiyo. Waxaan dalbanaynaa in dowladdu ka jawaabto wiilashii iyo gabadhihii Soomaaliyeed ee loo qaaday Eritrea. Waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha xilkiisu dhamaaday inuu bannaanka soo istaago oo uu masuuliyaddaas qaato,” ayuu yiri Cabdiraxman Cabdishakuur.
Cabdiraxman Cabdishakuur ayaa sheegay in markii horeba aan dhalinyaradan lagu qaadin nidaam sharciga waafaqsan islamarkaana ay dowladdu ka meer meerayso in ay jawaabta saxda ah siiyo waalidiinta ubadkooda ka maqan yihiin.
Wararka Maanta : Guddiyada Doorashada oo amar la siiyey iyo guddigii uu magacaabay Roob...
“Waxaan rabaa in aan hadda la hadlo raysal wasaaraha. Waxaan ka rabnaa inuu waalidiinta la kulmo. Waxaan rabaa inuu arrintaas ka gambanin oo uu jawaab waafi ah ka bixiyo ciidanka Soomaaliyeed ee ku maqan Eritrea iyo mowqifkiisa kaga aadan,” ayuu yiri Cabdiraxman Cabdishakuur.
Si kastaba ha ahaatee, Warbixin uu soo saaray xafiiska Qaramada Midobay ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamadii Soomaaliya ee tababarka ciidan ku qaadanayay dalka Eriteriya, ay ka qeyb qaateen dagaalada ka dhacay gobolka Tigray ee dalka itoobiya.
Wararka Maanta : Madaxweynaha Jubbaland oo magacaabay guddoomiye cusub
Related Topics:CabdirxmaanCabdishakuurDEGDEGFeaturedinuuraysalRooblesomaliweyn wararka maantausooWaaWararka Maantawararka maanta - bbcwararka maanta 2020 somaliwararka maanta 2021wararka maanta ethiopiawararka maanta hiiraan onlinewararka maanta muqdishowararka maanta muqdisho 2021Wasaare
Waddamada reer Yurub oo warbixin kasoo saaray doorashooyinkii ka qabsoomay …
Dowladda Soomaaliya oo shaacisay waqtiga xariga laga jaraayo dhismaha…
Hordhac: Kulamada Group B Slovakia Vs Spain, Iyo Sweden Vs Poland, Xidigaha…
Deg Deg: RW Rooble oo amaro Culus soo saaray, Dagaalka MD Farmaajo & Gud….
Gudoomiyihii xilka laga qaaday ee Gobolka Gedo oo lagu xanibay…
In kabadan 700 oo caruur ah oo lagu dilay Soomaaliya sanadkii 2020- sida…
Wararkii ugu Danbeeyey itoobiya oo BOM ku Dhufanaysa Masar Cabsida Laga…
Raysal Wasaaraha Soomaaliya oo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ugu…
Gudoomiyihii hore ee Gobolka Gedo, Cismaan Nuur Xaaji (Macalimuu) ayaa sheegay in isaga iyo xubno kale oo gobolkaasi ka soo jeeda ay ku xaniban yihiin Magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha ayaa Taliye Kuxigeenka Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA), Cabdullaahi Kullane ku eedeeyay inuu ka hor istaagay in ay ka dhoofaan Garoonka Aadan Cadde.
“Waxaan ku xayiranahay magaalo madaxda Muqdisho, keligeena maaha waa masuuliyiintii iyo intii dhammaan ka soo jeeday Gobolka Gedo. Waa siyaasiyiintii, odayaashii iyo dadkii waxgaradka ahaa ee gobolka ka soo jeeday.” Ayuu yiri Gudoomiyihii hore ee Gobolka Gedo oo la hadlay BBC.
“Dhammaan waxaa na lagu hortaagan yahay Garoonka Aadan Cadde.” Ayuu yiri isagoo intaa ku daray “Saraakiisha hoggaamineyso NISA ayaa nagu hortaagan. Nin la yiraahdo Cabdullaahi Kullane ayaa meesha nagu hortaagan.”
Sababta loo hor istaagay oo la weydiiyay ayaa ku jawaabay “Dadkaa waxa loo celinayo waa in dalkii doorasho u socdo, oo aysan wax dooranin, sida dhammaanteen aan is tusnay Xildhibaanada inaanan la dooranin. Dadku waxgarad weeye, waxaa loo socdaa dhammaan in deegaanada laga soo doorto Xildhibaanada. Waxaa socdo Xildhibaanadii ka soo jeeday gobolka, Odayaashii Dhaqanka, Siyaasiyiintii, Wariye-yaashii iyo hooyooyinkii, oo u socdo gobolkii.”
Macalimuu ayaa yiri “Taliye Kuxigeenka NISA, Cabdullaahi Kullane ayaa wuxuu go’aansaday inuu ku celiyo dadka Garoonka Aadan Cadde, arrintaasina sax maaha, mana suurtagelayso. Haddaan nahay siyaasiyiintii waxaan diyaar u nahay arrintaasi inaan si dhab ah ugu istaagno, ugana hadalno.”
Wararka Maanta : Midowga Yurub oo dhimay mushaarka ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya
“Waxaa Muqdisho iigu yeeray Madaxweynihii dalka Somaliya u sareeyay iyo nin Xaashi la yiraahdo, waxaan imid Muqdisho ayaga dartood ayaan u imaaday, waxaana ku xayiranahay sagaal bilood oo berri ama berri damaa baxeysaa la leeyahay, anna inaan hotel iska jiifo sax maaha. Markaan imidna talooyinkii koobaad ee la ii soo jeediyay waxaa ka mid ahaa dalka dibadiisa inaan isbitaal u aado, anigana maahi nin xanuunsan, isbitaal wax aan ka raadinayana haddee ma jiraan.” Ayuu yiri Macalimuu.
Macalimuu ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada inuu qorsheynayo xaalad amni oo uu ka abuuro Gobolka Gedo, marka uu dib ugu laabto, sidaasina loo maleynayo inay dowladdu ugu diidan yahay inuu xilligan dib ugu laabto gobolkaasi.
“Gobolka Gedo waan u dhashay, meel aan colaad u quuro maaha, haddii aan colaad gelinayana anoo la i soo khasbin, ciidan-na uusan i soo qaadin oo aanan xirnayn oo ciidan wataa diyaarad ka soo raacay, haddaan wax khasayo ama aan rabo inaan colaad geliyo anoo xilka la’iga qaadaa dagaalami lahaa, anigana inaan ku dagaalamo Gobolka Gedo diyaar uma ihi, waxaan u diyaarsanahay dowlad kasta oo shaqaynayso inaan ku garab istaago.” Ayuu yiri Macalimuu oo intaasi raaciyay “Maalintii la i bedelay illaa iyo hadda dowladda waan la shaqaynayay, waana garab taagnaa.”
Taliska Hay’adda NISA ayaan ka jawaabin eedeyntan ugu dambeysay ee kaga timid Cismaan Nuur Xaaji (Macalimuu), Gudoomiyihii hore ee Gobolka Gedo.
Talaado, Juun, 22, 2021 (Wararka-Maanta) – In ka badan 700 oo caruur ah ayaa lagu diley ama lagu naafeeyey Soomaaliya sanadkii 2020 kadib xadgudubyo ay geysteen kooxda Al-Shabaab, ciidamada dowladda, maleeshiyo beeleedyo iyo AMISOM, sida lagu sheegey warbixin cusub oo ay soo saartay Qaramada Midoobay.Warbixinta ayaa xustay in 222 carruur ah la dilay halka 481 la naafeeyey. Tirada kamid ah dhibbanayaasha oo dhan 252 waxaa lagu eedeeyay Al-Shabaab halka ciidamada dowladda ay mas’uul ka ahaayeen 43 kiis.
Wararka Maanta : Xisbiga UCID oo ka tanaasulay loolanka doorashada mayor ka caasimada...
Warbixintu waxay sidoo kale ciidanka Booliska Soomaaliya ku sheegtay in ay ka masuul yihiin 35 kiis oo lagu dhibaateeyay carruurta, halka dowlad goboleedyada kiisas intaas ka yar laga diiwaan galiyay deegaanadooda
Khasaaraha ugu badan oo gaaraya 158 kiis, waxaa warbixinta lagu sheegay inay ka dhasheen waxyaabaha qarxa ee macmalka ah waxaana ku xiga is rasaaseyn dhex martay kooxo hubeysan oo ay ku wax yeeloobeen 155 carruur ah.
Ciidamada Amisom ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay geysteen shan kiis, halka ciidamada difaaca Kenya ay warbixinta ku xustay saddex kiis. Waxaa jirta tiro dhan 296 kiis oo dusha loo saariyay kooxo hubaysan oo aan la aqoonsan.
Wararka Maanta : Daawo: Xildhibaan Zakariye oo shaaciyey inuu askarta maqan kala...
Warbixinta ayaa sidoo kale xustay in 1,442 wiilal ah iyo 53 gabdhood oo qaarkood ay da`doodu yartahay sideed sano ay qoreen Al-Shabaab iyo Ciidamada Amniga Soomaaliya ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed.
Kiisaska badankooda oo gaaraya 1,169 waxaa qortay Al-Shabaab, waxaana ku xigay 100 kiis oo ka tirsan Ciidanka Booliska Soomaaliyeed halka 74 ka mid ah ay qorteen Ciidanka Xoogga Dalka.
Talaado, Juun, 22, 2021 (Wararka-Maanta) – Ra’iisul Wasaaraha xukumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku casuumay madaxda Golaha Wadatashiga Qaran shir Sabtida ka dhacaya magaalada Muqdisho.Raysal Wasaaraha ayaa sheegay in shirkaan la isaga xog wareysandoono waxyaabihii ka qabsoomay arrimaha doorashooyinka tan iyo heshiiskii 27-kii May iyo dardar gelinta shaqooyinka harsan.
Qabashada shirkan ayaa ku yimid kulan qadka foggaan araga ku dhexmaray Ra’iisul Wasaare Rooble, Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, waana wada hadalkii ugu horeeyay ay masuuliyiintu yeeshaan tan iyo heshiiskii doorashada ee 27 May.
Shirka Muqdisho lagu qabandoono ayaa kusoo beegmaya xilli jadwalkii doorasho ee lagu heshiiyay uu ka harsan yahay muddo bil iyo todobo cishe.
Tallaabooyinka ugu muhiimsan ee horay loo qaaday waxaa kamid ah in isbedel lagu sameeyay guddiyadii doorashooyinka ee cabashadu ka taagnayd iyo dhismaha guddiga amniga doorashada oo raysal wasaaruhu hormuud u yahay.
Marka la eego shaqooyinka harsan iyo waqtiga la haysto oo aad u yar, waxaa hubanti la’aan ah in doorashada waqtigeeda dib uga dhicidoonto.
Wararka Maanta : Guddiga la dagaalanka musuq maasuqa oo sheegay inuu la dagaalamidoono musuq...
Daawo: Xaguu marayaa dagaalka culus ee ka socda gobolka Shabeellaha Dh…
Jowhar (Wararka Maanta) – Afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed G/Sare Cali Xaashi Cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaalka u dhexeeya Militeriga Soomaaliya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka socda deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe.
Wararka Maanta : Somaliland oo amar culus dul-dhigtay musharraxiintii guuleystay + sababta -...
Guddoomiyaha xisbiga Waddani oo xukuumada ku eedeeyey in anay ku…
Talaado, Juun, 22, 2021 (Wararka-Maanta) – Guddoomiyaha xisbiga Waddani Cabdiraxman Maxammed Cabdilahi (Cirro),ayaa sheegay in xukumadu anay ku qanacsanayn aqlabiyada isbahaysiga mucaaradka.Guddoomiyaha ayaa yidhi” xukuumadu 30 keedi xildhibaana 52 ayay ka dhigaysa, 52 xildhibaan ee mucaaradkana 30 bay ka dhigaysa”.
Cirro ayaa ku andacooday in loobahanyahay in xukuumadu iimaansato qaybta ay doorashadi ka heshay.
“Xukuumadu waa in ay iimaansata aqlabiyadu halka ay martay” ayuu yidhi guddoomiye Cirro.
Cirro ayaa sidookale sheegay in shacabku isbadal u codeeyeen isbadalkiina dhacay.
Wararka Maanta : Dowladda Itoobiya oo shaacisay magacyada Dekadaha ay isticmaaleyso -...
“Shacabku waxay u codeeyeen is badal, waxayna aqlabiyadoodi u codeeyeen 52 kaa xildhibaan oo kamid ah 82 xildhibaan ee golaha” ayuu yidhi guddoomiye Cirro.
Isbahaysiga mucaaradka Somaliland ee UCID iyo Waddani, oo haysta aqlabiyada golaha wakiilada, ayaa dadaal ugu jira sidi ay ugu guulaysan lahayeen shirgudoonka golaha.
Rooble oo casuumad rasmi ah u diray madaxda dowlad goboleedyada + Ujee…
Muqdisho (Wararka Maanta) – Ra’iisal wasaaraha xukumadda xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble ayaa casuumad rasmi ah u diray madaxda Golaha Wada-tashiga Qaranka, si maalinta Sabtida ay iskugu imaadaan shir ka dhacaya magaalada Muqdisho.
Shirka Sabtida ayaa imanaya kadib markii uu xalay Ra’iisal Wasaare Rooble uu kulanka dhanka qadka Zoom-ka ah kula yeeshay madaxda dowlad goboleedyada iyo duqa Muqdisho oo aan kulmin wixii ka dambeeyey markii uu dhacay heshiiskii doorashada ee lagu saxiixay magaalada Muqdisho.
Wararka Maanta : Dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay Kenya xor u tahay inay dib u furato...
Xogta shirka Sabtida oo ay hore u baahisay Wararka Maanta ayaa waxa uu qeyb ka yahay dar-dar gelinta heshiiskii doorashada iyo kor joogteynta hanaanka doorasho ee hore loogu heshiiyey iyo howlihii qabsoomay.
Shirka lagu wado in maalinta Sabtida uu ka furmo magaalada Muqdisho ayaa waxa uu qorshuhu yahay inay hortegi doonaan guddiga farsamada ee uu magacaabay Ra’iisal Wasaaraha, kuwaasi oo warbixin siin doona madaxda Golaha Wada-tashiga Qaranka.
Sidoo kale xog ay heshay Wararka Maanta ayaa waxay sheegeysa in Ra’iisal Wasaare Rooble uu magacaabi doono guddi dib u heshiisiin ah, kaas oo heer wasiirro ah, waxaana xubnaha guddigaas laga soo kala xuli doonaa xukuumadaha dowlad goboleedyada oo aysan ku jirin Jubbaland.
Wararka Maanta : Saldhiga Ciidamada Cirka Maraykanka ee Cabsida Laga Muujiyey | Xulashada...
Deg Deg: Xogta Kulanka RW Rooble Iclaamiyey, Kenya oo dalab cusub u dirtay…
Qodob ka mid ah heshiiskii doorashada ee xiisadda Gedo oo maanta la fu…
Mareykanka oo diyaarinaya qorshe Ciidamada ugu soo celinayo Soomaaliya…